Kana uchida kuunganidza mashoko ari digitaalinen zera, unofanira kuziva kuti uri aikwikwidzana vanhu nguva. nguva ino uye kutarisirwa hahusi chinokosha kwamuri; ndicho yakatsvuka zvinhu pakutsvakurudza kwako. Masayendisiti akawanda munzanga vakajaira akagadzira kutsvakurudza kuti huri nhapwa vakawanda, dzakadai undergraduates vari kembasi Labs. Muzviruva izvi, zvinodiwa muongorori dhomineta, uye kufadzwa vechikamu haisi kukoshesa. In digitaalinen zera tsvakurudzo nzira iyi hakusi kutsigira. Vatori vechikamu vanowanzobatwa kure vatsvakurudzi uye kudyidzana pakati zviviri kazhinji yairevererwa kombiyuta. marongero Izvi zvinoreva kuti vatsvakurudzi aikwikwidzana vechikamu kutarisirwa saka vanofanira kuumba kunakidza mukwikwidzi ruzivo. Ndokusaka mumwe chitsauko kuti zvaisanganisira kuwadzana vechikamu, takaona mienzaniso zvidzidzo kuti akatora ubatanidzwe zvakatinakira kusvika nemashoko muunganidzwa.
Somuenzaniso, muChitsauko 3, takaona kuti Sharad Goel, Winter Mason, uye Duncan Watts (2010) akasika mutambo unonzi Friendsense kuti raingova akangwara puranga kumativi maonero ongororo. MuChitsauko 4, takaona kuti unogona kusika razero shanduka mari Data kuburikidza mazano kuedza kuti vanhu chaizvoizvo kuda kuva, dzakadai mumhanzi kudhanilodha kuedza kuti ini akasika naPetro Dodds uye Duncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Pakupedzisira, muChitsauko 5, takaona kuti Galaxy Zoo akasika guru kutsigirana kuti vanhu vanopfuura 100,000 chakaita kubatanidzwa mune imwe muchadenga (mu zvose pfungwa shoko) mufananidzo Kunyora basa (Lintott et al. 2011) . Mune imwe neimwe Muzviitiko izvi, vaongorori nezvezvandaifanira pakusika munhu chiitiko chakanaka vechikamu, uye chimwe nechimwe, ichi kusvika mukwikwidzi zvakatinakira kwakaita mhando itsva kutsvakurudza.
Ini kutarisira mune ramangwana, vatsvakurudzi acharamba kukudziridza nzira nemashoko muunganidzwa kuti zvinoedza kusika yakanaka User ruzivo. Rangarirai, mumazuva digitaalinen zera, vatori zvenyu mumwe watinya kure vhidhiyo ane Skateboarding imbwa.